Fisaoran’ny vondrona kristiana katolika – MyDago.com aime Madagascar
Fisaoran’ny vondrona kristiana katolika
Nandefa taratasy fisaorana ny eveka eto Madagasikara ny Vondron’ny Krisitiana Katolika Mijoro amin’ny Fahamarinana.Toy izao ilay fanambarana :
Voninahitra ho anay «Vondron’ny Krisitiana Katolika Mijoro amin’ny Fahamarinana» no maneho etoana ny fisaorana sy fankatelemana feno ho anareo ; tamin’ny hafatra fankaherezana nataonareo tamin’ny Pentecôte : « Ny marina no maha olona afaka anareo » (Joany 8,32).
Mbola ao anatin’ny tebiteby, adin-tsaina, asa very, tokantrano sahirana, fijaliana ary fahafatesana mihitsy aza izahay zanakareo amin’izao fotoana izao. Ny nitenenareo anefa dia nitondra hery sy tanjaka ary fankaherezana ho anay. Tsy miady irery intsony no tsy kamboty velon-dray aman-dreny, fa manana anareo mijoro, indrindra amin’ny fotoan-tsarotra toy izao izahay. Ny fandraisana adidy sy andraikitra amim-pahendrena sy fahamarinana dia tsy an’olon-dratsy, koa : Miandry ny fifanomezan-tanana avy aminareo ary izahay hiady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny jadona, ny tsy fahamarinana, ny tsy fisian’asa… mba hiadanan’ireto Kristiana zanakareo mijaly, sy mba hampilamin-tsaina anareo koa.
Masina Maria Mpiaro ny Tanindrazantsika anie hitahy sy hanampy antsika amin’ny ezaka hiaraha-manao. Eto a-pamaranana dia mamelà anay ianareo EVEKA mba hisaotra ireo Pretra sy Relijiozy lahy na vavy tsy namela anay ho irery, indrindra indrindra ireo nankahery sy niara-nivavaka taminay.
Raiso ry Ray aman-dReny hajaina ny fanajana feno atolotray anareo.
(Sonia maro tsy hay vakiana)
Fanambaran’ireo voafonja politika 2009-2010
Auteur Solo RazafyPublié le 13 juin 2010 18 septembre 2010 Catégories Malagasy, Politique, Religion
16 réflexions sur « Fisaoran’ny vondrona kristiana katolika »
14 juin 2010 à 5 h 39 min
Misaotra antsika vondron’ny Mpino Katolika Kristiana tamin’io taratasy io….
Kanefa mbola mangataka mafy ihany izahay: ANGATAHANAY Monseigneur OMAR (Odon Marie RAZANAKOLONA )mba hiteny MANOKANA hanameloka izao habibiana izao, satria izy mihitsy no rangory fototry ny afo nahatonga izao fahantrana, habibiana, vonoan’olona,…. izao nohon’ny fihetsika sy ny fitongilanany tamin’ireny andro mavaivay ireny!
Mitenena ianao Monseigneur, sahia mijoro fa raha tsy izany dia mbola miahiahy ihany izahay fa fitsarana ivelan-tsihy ny fihetskao miafina ao ambadik’ireo Vondrona Katolika ireo!
14 juin 2010 à 7 h 12 min
Inona koa ny antony naandefasan’ i Vatican nonce vaovao izay noeken’ny filohan’ ny puschiste Andry Rajoelina ny fanekena azy?
14 juin 2010 à 7 h 14 min
Aiza ny maha doublon an’io tompoko ô !
Laitsitehanandratsy dit :
14 juin 2010 à 7 h 22 min
Aiza indray no misy an’izany « Vondron’ny Kristiana Katolika Mijoro amin’ny Fahamarinana » izany ?
Izany hoe misy izany Vondron’ny Kristiana Katolika Tsy Mijoro amin’ny Fahamarinana ?
Rehefa Katolika Tompoko dia antsoin’i Kristy daholo Hijoro amin’ny Fahamarinana. Sao ianareo mitady hampiady ny samy Katolika eo indray …
14 juin 2010 à 8 h 51 min
Sarotra be angaha ny nanatevin-daharana ny HMF sa hoe ny FJKM no efa hita teo mialoha dia matahotra sao dia tsy hita tsara?
Mahagaga ihany mantsy ny zava-mitranga amin’izao fotoana izao…
Aleo aho hangina fa mihoatra ny loha ny zavatra ataon’ny sasany!!!
14 juin 2010 à 8 h 54 min
inona koa no tiany Alidera atao?tsara ny mangina rehefa fotoana tokony hanginana,katolika dia iray tsy mivaky fa tsy misy marina sy tsy marina izany
14 juin 2010 à 9 h 11 min
Fa inona no tian’i Krisy ho ataoko?
Sa aleon’i Kristelle mahita an’i Turquie sy i Libye ary i Pakistan eraky i Madagasikara toa izay mahita FJKM?
Tadidio fa tsy maharesy an’ireo intsony i Vatican amin’izao!!! Tsy efa impiry moa i Vatican no nifona tamin’ireo?
Azonao ve ilay tiako lazaina?
14 juin 2010 à 11 h 13 min
Misy ny katolika mijoro amin’ny fahamarinana ary misy tokoa ny tsy mijoro amin’ny fahamarinana tahaka ny any amin’ny finoana sasany ihany koa. Tsy heloka ny mijoro amin’ny fahamarinana, ary tsy fanasarahana antsika katolika akory izany, mijoro ho mpitarika satria manana andraikitra ireo olona ireo, koa isaorana betsaka azy izany.Mbola hidera azy isika ao aoriana ao satria manana mpiara-mivavaka sahy mijoro, sy manitsy ny mpitarika ny finoantsika. Aza hadino fa efa maro ny pretra sy relijiozy mijoro koa amin’ny fahamarinana, saingy noho ny rafitra misy amintsika katolika dia tsy hita toy ireny HMF ireny izireo, ary tsy te-hampisaraka, na hanala baraka ny Mpitarika ihany koa.
Hatsaharo ny fankahalana, halaviro ny fisaraham-bazana, fa ny katolika dia katolika ihany, ary raha mitory ny fahamarinana isika tsy midika velively fa handeha hiova finoana ka ho lasa FJKM.Samy kristianina isika koa aoka i Jesoa mpampihombona no hitarika antsika ao amin’ny fahamarinany. Aza hadino fa ny teny mahery tsy mba fahamarinana!
14 juin 2010 à 12 h 54 min
Marina mihitsy ny anao fa resin’ny mahakatolika ny fahamarinana. Moa tsy efa izany ve no nampiady an’i Vatican tamin’i Luther ka nahatonga an’i Luther ho « excommunié »?
Ny zavatra mampalahelo dia izao, rehefa voaporiporitra tsy afaka maneho ny heviny any amin’ny fiangonana katolika ny mpino katolika dia any amin’ny « fiainam-bahoaka » izy no mitaky fa « démocratie » izay lazainy fa fahalalahana izany.
Efa mahazatra io hoe aleo mangingina ny fahamarinana toa izay tsy katolika io e!!! efa mahazatra io!!!
14 juin 2010 à 13 h 28 min
Karazana fanairana foana io:
« Mbola ao anatin’ny tebiteby, adin-tsaina, asa very, tokantrano sahirana, fijaliana ary fahafatesana mihitsy aza izahay zanakareo amin’izao fotoana izao. »
Ny ahy ny tsy laitrako eo amin’ny samy Kristianina dia ilay tonga dia mampiseho agressivité…
MISAOTRA ANAREO Vondron’ny Krisitiana Katolika Mijoro amin’ny Fahamarinana nanao izao dingana iray izao indray!
RAZAFIMALALA ISABELLE dit :
14 juin 2010 à 17 h 49 min
Mbola tsy manangasanga izany fisarahambazan’ny katolika izany , ary mitolona amim-bavaka isan’andro izahay ny tsy hisian’izany . Ary tsy hitako mihitsy ny antony ananjehina ny Excellence Archevêque Odon @ izay korontana misy eto . Hadinon-tsika angaha fa t@ ireny vono moka tamin’ny 7 fevrier ireny , Arseveka irery no namangy fahoriana teny Mahamasina nizaka ny tora-bato sy ny horakoraky ny olona , fa taiza lala rasendrahasina no tsy mba nanameloka ireny fihetsika ireny , fa rehefa maty ny Pasitera teny amin’ny mausolée dia nivoaka tamin’ny fahanginany ihany izy nanameloka . Hanao asa fitoriana ny tenin’A/tra sy asa fanirahina koa ve enao de tsy any am-piangonana no hiantso ny olona fa eny amin’ny camp miaramila , de rehefa tra-paty eny de ny miaramila manao ny asany no lazaina fa diso . Sa atao fialokalofana toy ny tamin’ny andron’i dada ny fivavahana ? Minoa fotsiny ihany àry é ! Point barre.
14 juin 2010 à 18 h 07 min
Mba tena tapina angaha ny masonao Rtoa RAZAFIMALALA Isabelle ka tsy mahita ireny fihetsik’i Monseigneur OMAR tamin’ireny fotoana ireny?… Sa tsy teto Antananarivo ianao ka tsy mahalala ny tena marina?
Katolika ny tenako Tompoko, kanefa tsy ihatsara ivelan-tsihy aho na koa hanafina ny MARINA, fa mafy loatra ny zavatra nataon’i OMAR teto, ary izy mihitsy ny rangory fototry ny afo nahatonga an’izao kirizy izao!
Aoka isika Katolika tsy hanova ny marina, ka hiafina ao ambadiky ny akanjon’ireo relijiozy sy pretra ary arseveka. Misaotra an’ireo Vondrona Kristiana Katolika ny tenanay, satria tsy fisaraham-bazana akory izany fa fahasahiana milaza ny marina!
Misaotra anareo Katolika Mijoro. Enga anie ianareo hijoro h@ farany hiarovana ny Vahoaka malagasy rehetra aza asiana avakavaka mihitsy. Indrindra indrindra ireo efa maty marobe t@ 7 febroary. Asandrato ny vavaka ho an’ireo fianakavian’ny maty, ireo kamboty mahantra tsy fidiny. Tadiavo ny marina ny @ iny 7 Febroary fa raha manao an’izany ianareo hanohana anreo ny vahoaka.
Samy nampiasa ny fivavahana ho fitaovana ny daholo mpanao politika na katolika na protestanta na silamo sns.
Ny hita miavaka teto Madagasikara dia Ravalomanana ihany no nahay nampiasa ny fivavahana mba hampandrosoana ny firenena. Ry Odon Rajakonolona dia nampiasainy hanapotehana ny firenena ny fivavahana. Ka tadiavinareo hiteny haninona izy? Faly dia faly izy amin’izao manjo ny firenena izao satria izao no mission tiany sy nampanaovina azy.
Gaga anareo aho , mivavaka ve dada de roahina tsisy hatak’andro ry RP Urfer ? Foanana tsy nisy mise en demeure ny fandaharana karajia Don Bosco ? Roahina ao anatin’ny 24h i Jean Marc Koumba ? Nefa Ankoatra ny fangalarana ny fanaovana Yaourt ny zandriny izay tena tompony ,
Précédent Article précédent : Ny Diako
Suivant Article suivant : Ny Malagasy sy ny 26 jona